सिल्टलले के भन्छ कि वेब स्क्रैपिंग भनेको हो
वेब स्क्रैपिंग विभिन्न वेबसाइटहरु बाट डेटा को ठूलो मात्रा निकालन को प्रक्रिया हो एक उपकरण वेबसाइट स्क्रैप भनिन्छ। निकालेको डाटालाई नामित फोल्डर वा कुनै अन्य स्थानमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ। यो तालिका वा स्प्रेडशिट ढाँचामा डाटाबेसमा पनि बचत गर्न सकिन्छ।
धेरै भन्दा वेबसाईटहरूको सामग्री केवल वेब ब्राउजर प्रयोग गरेर हेर्न सकिन्छ। तपाइँ आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि प्रतिलिपि सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंको मात्र विकल्प म्यानुअल रूपमा सामग्री प्रतिलिपि गर्न र यसलाई टाँस्नु हो। थोरै र निराशाजनक बाहेक, यो पनि समय-समय भइरहेको छ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले 200-पज गरिएको वेबसाइटको सबै सामग्री प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले धेरै मात्रामा समय लिनेछ!
तथापि, वेब स्क्रैपिंग यो प्रक्रिया हो जुन यो प्रक्रिया स्वचालित गर्न सक्छ। म्यानुअल प्रतिलिपिको सट्टा, वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर वा वेबसाइट खरानीले धेरै छोटो समयमा काम गर्नेछ। यसले तपाईंलाई धेरै दुखाइ, प्रयास र समय बचाउनेछ।
सफ्टवेयरमा डेटाको विभिन्न तत्वहरू तपाईंको अनुरोध प्रति विभिन्न वेबसाईटहरूको बहु वेब पृष्ठबाट स्क्रैप गर्ने क्षमता छ। हाल, वेबसाइटको दुई प्रकारका स्क्रैपर्सहरू छन्। विशेष उद्देश्य वा वेबसाइटहरू। अर्कोतर्फ, त्यहाँ सामान्य स्क्रैपर्सहरू छन् जुन कुनै पनि वेबसाइटको साथ काम गर्न कन्फिगर गरिएको हुन सक्छ। जुनसुकै तपाईले रोज्नुभएको छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँ केवल स्थानीय बटनमा केही डेटा निकाल्न र बचत गर्न एकल बटन क्लिक गर्न आवश्यक छ। ( 3)
यस तथ्यको कारणले कि अनुकूलित सफ्टवेयरको लागत धेरै अधिक छ, धेरै मानिसहरू सामान्य वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयरको लागि जान चाहन्छन्। तथापि, ती व्यक्तिहरू पनि उनीहरूको कमजोरी छन्। उनी सेटअप र प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छन्। , विशेष गरी एक गैर-प्रयोगकर्ताको प्रयोगकर्ताको लागि। र तिनीहरू अक्सर सिक्न गाह्रो हुन्छन्।
यो जहाँ हो जहाँ वेबहर्वी काममा आउँछ। यो सामान्यतया सामान्य वेबसाइट स्क्रैपर्स प्रयोग गर्दा कठिनाइहरूको सामना गर्न विकसित भएको थियो। एक सहज ज्ञान, बिन्दु प्रदान गर्दछ र इन्टरफेस क्लिक गर्नुहोस् ace। वेबहर्वीको साथ, कुनै पनि वेबसाइटबाट डेटा निकासी एक मिनेटको केहि मिनेट हो।
उपकरण एक भिडीयो क्लिपको साथ आउँछ जुन यसले कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ र तपाईंको डेटा निष्कर्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिडियो हेर्न पछि, तपाइँ कसरी सिक्नु सरल छ यसको बिन्दु र इन्टरफेसमा क्लिक गर्नुहोस्। वास्तवमा यो उपकरण बाहिर खडा छ भन्ने तथ्य यो कन्फिगर गर्न कुनै कोडिङ आवश्यक छैन। यो तपाईंको माउसको केहि क्लिकहरूसँग कुनै पनि वेबसाइटबाट डाटा स्क्रैप गर्न कन्फिगर गर्न सकिन्छ। डेटा स्क्रेप गर्न चयन गर्न, तपाइँ केवल डेटा तत्वहरूमा आफ्नो माउस बिन्दु गर्न आवश्यक छ। यसलाई मूल्याङ्कन गर्न, तपाईं यसको मूल्यांकन संस्करण प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँ भिडियो प्रदर्शन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
(2 9) कारणले तपाइँलाई वेबह्वेरि कोसिस गर्नुपर्छ:
जेनेरिक डाटा स्क्रैपर हुनु, यो अनुकूलन निर्माण भन्दा सस्तो छ
यसलाई सेट अप र प्रयोग गर्नको लागी कुनै कोड चाहिँदैन। 33)
यो गैर-टेक्निकल प्रयोगकर्ताको लागि पनि प्रयोग गर्न सजिलो छ
यो एक मूल्यांकन संस्करण र एक भिडियो डेमो
. Source - vichy neovadiol oil